War rasmi ah oo kasoo baxay waxa loogu yeero Q.Midoobay ayaa lagu sheegay in laxiray xafiiskeedi wadanka Burundi kadib amar ka yimid maamulayaasha wadankaasi.
Saraakiil katirsan UN-ka ayaa sheegay maalintii Talaadada in ay albaabada laysugu laabay xafiiskii Hay'adda xuquuqul insaanka Q,Midoobay ee magaalada Bujumbura caasimadda wadanka Burundi, amar kasoo baxay dowladda Burundi ayaa lagu sheegay in si KMG ah loo xiray dhammaan xafiisyadii hay'adaasi ay ku laheyd wadanka.
Khilaafka u dhaxeeya Q.Midoobe,Midowga Yurub iyo dowladda Burundi ayaa cirka iskusii shareeyay sanadadii lasoo dhaafay kadib markii madaxweynaha Burundi ninka lagu magacaabo Nkurunziza uu ku shubtay doorashooyinkii madaxtinimada wadankaasi ka dhacay.
Michelle Bachelet oo ah haweenayda madaxda ka ah hay'adda xuquuqul insaanka Q.Midoobe ayaa magaalada Geneva ka sheegtay in ay aad uga xuntahay hab dhaqanka dowladda Burundi waxayna ugu baaqday shaqaalaha hay'adda in ay wadanka isagasoo baxaan.
Warbixinno ay Q.Midoobe soo saartay sanadihii 2017 iyo 2018 ayaa si kulul loogu eedeeyay dowladda Burundi in ay ku xadgudubtay waxa loogu yeero Xuquuqul insaanka islamarkaana dowladdu geysatay dilal sharci darra ah iyo howlgallo raaf ah oo ka dhan ahaa dhammaan dadka mucaaradsan siyaasadda madaxweynaha wadankaasi.
Khilaafkan cusub ee soo kala dhaxgalay Burundi iyo UN-ka wuxuu imaanayaa xilli kun askari oo kamid ah ciidamada Burundi laga rukhseeyay ciidamada AMISOM ee duullaanka ku jooga dalka Soomaaliya kuwaas oo lagu amray in ay dalka isaga baxaan.
Mas'uul u hadlay Ururka Midowga Afrika ayaa sheegay in wax mushaar ah aysan siin doonin 1000 askari Burundeys ah oo Soomaaliya ku sugan wixii ka dambeeyay koowdii bishan Maarso waxaana muuqata in cadaadiska dowladda Burundi ay wajaheyso uu hoos udhac ballaaran ukeenayo dhaqaalaha dibadda kasoo gala wadankaas oo badanaa ay ka heli jirtay duullaanada ciidamadeedu ku qaadeen Soomaaliya iyo Afrikada dhexe